Izibane zetrato, ukukhanya kwebhokisi yebhokisi, ukukhanya kwebala - UNIKE
I-UNIKE Technology Limited yishishini eliphantsi laseHongkong elineSebe laseShenzhen elikwisithili saseBan'an, eShenzhen ukusukela ngo-2016 kunye nomzi mveliso wayo (iBelux) ebekwe kwisixeko saseZhongshan ukusukela ngo-2012. njengokukhanya kwe-LED High Bay, ukukhanya kwe-Canopy Light, ukukhanya kwesitrato se-Mast, ukukhanya kwesitalato i-LED, ukukhanya kwetonela ye-LED, ukukhanya komkhukula we-LED, ukukhanya kwe-batten ye-LED, kunye nezinye iimveliso ze-LED. Sinokubonelela ngokukhokelela kwezindlu ezikhanyayo kunye nezisombululo njengezinto ezithe zacelwa…
Ukukhanyisa kumasifundisane, kwindawo yokugcina izinto, isityalo, ibala elingaphakathi, isikhululo, iholo yomboniso, indawo yentengiso, isikhululo sokurhafisa, iziko lobuchule, isikhululo segesi, njl.
Iiluminaires ezisetyenziselwa ukuthengisa, indawo yokupaka, ibala elingaphandle, ibhodi yezaziso, itonela, ipaki, umfanekiso oqingqiweyo, isakhiwo esiphakamileyo, indawo yokudlala ibhola ekhatywayo / ibhola yomnyazi, inkundla yentenetya, njl.
Isetyenziswa ikakhulu kuhola wendlela, iindlela eziphambili, isibhakabhaka, isitalato sasezidolophini, indlela esecaleni kwendlela, iplaza, isikolo, indawo yokuhlala, ipaki kunye nenye indawo efuna ukukhanya kwangaphandle.